Ihowuliseyili VMC850 Chinese 3axis nkqo cnc cnc nkqo iziko machining yoMvelisi kunye noMthengisi | Lu Omncinci
I-VMC850 isiTshayina i-3axis ethe nkqo i-cnc iziko lokumisa nkqo
I-vmc850 3 axis nkqo iziko machining i-CNC sisixhobo esisebenza ngokukuko somatshini esizenzekelayo esenziwe ngezixhobo zoomatshini kunye nenkqubo ye-CNC. Ukusebenza kakuhle ngamaxesha angama-5-10 kweso sixhobo esiqhelekileyo. Kufanelekile kwimilo enzima yokusebenza kunye neemfuno ezichanekileyo eziphezulu; kunye nokuqhubekeka kwebhetshi encinci kunye naphakathi kweentlobo ezininzi zemisebenzi.
1. Inkqubo yolawulo lwe-CNC: I-GSK, i-siemens, i-fanuc, inkqubo yolawulo lwe-syntec inokuchongwa.
2. Taiwan 16 umnqwazi uhlobo okanye 24 uhlobo idiskhi imagazini, utshintsho ingalo ngoomatshini utshintsho isixhobo, yalatha ukhomba isixhobo utshintsho imizuzwana nje 1.9.
3. Iseti epheleleyo yenkqubo yokuluka ingeniswa kwimveliso yobungcali yaseTaiwan kunye nabavelisi abaxhasayo. Yonke into yokuluka ihlanganiswe phantsi kweemeko zobushushu obuqhelekileyo kwaye inobomi benkonzo ende.
4. Ukuvavanywa: Zonke izixhobo zefektri ziye zalandela amanyathelo okuhlola njengokuphazanyiswa kwelaser, umatshini wokukopa, kunye nemilinganiselo eyiyo.
Umba VMC850E VMC850 vmc855
Ubungakanani besebenzi (ubude x ububanzi) mm I-1000 * 400 I-1000 × 500 I-1000 * 550
Isithuba seT (mm) 5-18x100 5-18x100 5-18x90
Ubungakanani bokulayisha ubuninzi bokusebenza (KG) 500 600 600
Ukuhamba kweX-Axis (mm) 800 800 800
Uhambo lwe-Y-Axis (mm) 500 500 500
Uhambo lwe-Z-Axis (mm) 500 500 500
Umgama phakathi kwempumlo yokusonta kunye netafile (mm) 105-550 105-605 120-620
Umgama phakathi kweziko lokuluka kunye nekholamu (mm) 450 550 540
Taper yokuluka BT40-140 BT40-150 BT40
Ubukhulu. isantya yokuluka (ngomzuzu) 8000/10000/12000
Motor yokuluka (KW) 5.5 7.5 / 11 7.5 / 11
Isantya sokondla ngokukhawuleza: X, Y, Z axis (m / min) 16/16/16 (24/24 // 24 isikhokelo senqanawa)
Isantya sokusika ngokukhawuleza (m / min) 10
Ukuchaneka kwesimo (mm) ± 0.005 ± 0.005 ± 0.005
Phinda ukuchaneka kokuma (mm) ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003
Uhlobo lokutshintsha isixhobo ngokuzenzekelayo Izixhobo ezili-16 zohlobo lwentloko yotshintsho lwezixhobo
Ubukhulu. isixhobo ubude (mm) 300
Ubukhulu. Ubungakanani bezixhobo Φ80 (isixhobo esikufutshane) / φ150 (isixhobo esikufutshane)
Ubunzima besixhobo seMax. (KG) 8
Isixhobo esitshintsha ixesha (isixhobo-to-isixhobo) umzuzwana 7
Uxinzelelo lomoya (MPA) 0.6
Ubunzima Machine (KG) 4200 5500 5800
Ubungakanani obukhulu (mm) 2600 * 2300 * 2300 2600 * 2300 * 2300 2800 * 2400 * 2400
Amaziko e-CNC okuchwetheza angasetyenziselwa ukuvelisa ukungunda, iinxalenye ezenziwe ngebhokisi, iinxalenye ezigobileyo, iinxalenye ezikhethekileyo, iipleyiti, imikhono, iinxalenye zepleyiti, kunye nezinto eziveliswa ngobuninzi. Ilungele ishishini lonxibelelwano, icandelo lemveliso yeemoto, ishishini le3c, ishishini lenqwelo moya, njl
1. Ixesha lewaranti yomatshini uphela ziinyanga ezili-12.
2. Ukubonelela ngeenkonzo zaphesheya.
3. I-7 × 24 iiyure kwi-intanethi.
4. Uqeqesho lwasimahla luyafumaneka kumzi-mveliso.
Egqithileyo VMC650 ngesantya esiphezulu 3 axis nkqo metal cnc umshini wokugaya
Okulandelayo: vmc1060 mveliso metal 3 axis nkqo cnc umshini wokugaya iziko
Awr22 diamond ukusika ingxubevange ivili rim yokulungisa ma ...
XH7126 ukusika kwezoqoqosho metal cnc yokugaya machi ...
CK6132 ngobuciko High uhlobo gang gang isixhobo mac ...
TCK25 amancinci oluzenzekelayo uhlobo gang gang sl ...
VMC650 ngesantya esiphezulu 3 axis nkqo metal cnc mil ...
BC6085 Factory ixabiso ekubumbeni isixhobo umatshini kunye ...